50 Nkiri egwu di egwu ile anya na Tubi
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 50 Nkiri egwu di egwu ile anya na Tubi
by Brianna Spieldenner April 1, 2020 25,441 echiche
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile nọ n'ụlọ n'oge a, saịtị ntanetị na-enweta mgbatị a na-atụghị anya ya. Ọtụtụ mmadụ na-enubata na Netflix, Amazon Prime, na Hulu ka ha chee iche. The gụgharia ọrụ Tubi, Otú ọ dị, o yiri ka ọ na-ka ukwuu uzuoku, n'agbanyeghị na ọ bụ kpam kpam free. Ọ bụrụ n ’inwere oge n’aka gị (nke anyị niile na-eme), were obere oge lelee nnukwu egwu 50 dị egwu na Tubi ugbu a!
Otu nwere ike iche na ebe ọ bụ ọrụ nkwanye egwu n'efu, ha agaghị enwe ezigbo katalọgụ ịhọrọ site na, mana nke ahụ abụghị eziokwu maka ọtụtụ nnukwu ihe nkiri egwu iji lelee na Tubi. Edoziwo m ihe nkiri ahụ n'ụdị ise: ihe nkiri egwu egwu oge ochie, ihe nkiri jọgburu onwe ya na ụjọ, ihe nkiri egwu mba ọzọ, egwu egwu na egwu egwu, wee chọta ihe nkiri egwu egwu. Yabụ, guo n'okpuru ebe a iji lelee egwu egwu kachasị mma iji lelee na Tubi!
Omuma egwu egwu na Tubi
The Chain Texas hụrụ mgbuchapụ (1974): Akụkọ na-asọ oyi nke Tobe Hooper banyere ezinụlọ Sawyer na-eri anụ, na-agbada site na Texas otu nwata n'otu oge!
Hellraiser (1987): Ndị '80s bụ ndị nzuzu, ihe nkiri a bụ crazier. Igbe mgbaghoju anya di iche-iche, zombie enweghi akpukpo aru, BDSM, ndi mmuo ojoo ejikere nke oma, na obara obara. Ihe nkiri a nwere ihe niile.
Suspiria (1977): Otu n'ime ihe nkiri Giallo a kacha mara amara nke akụkọ akụkọ Dario Argento duziri. Ihe osise a na-esochi nwa agbọghọ America nke debanyere aha na ụlọ akwụkwọ mmuta mara mma nke ndị amoosu na nzuzo.
Ofbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ (1985): Nlekọta a na-eme emume nke George Romero Night na Dawn of the Dead. Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọrụ agha nọgidere n'ime ala bonka dị ka zombie apocalypse na-eyi ha egwu n'elu.
Carnival nke Mkpụrụ Obi (1962): Ihe nkiri a na-ejighị kpọrọ ihe na-acha ọcha na oji ebe ebe ọhụụ dị iche iche na-amalite ime nwanyị na-eso ihe ọghọm ụgbọ ala.
Onye na - egbu egbu site na Ohere (1988): Ihe nkiri egwu a jọgburu onwe ya emeela ka ndị ọbịa gbanwee ka obodo clowns na-atụ ndị obodo America ụjọ.
Ogige Sleepaway (1983): Ogige a na-eme n'oge okpomọkụ a bụ nkọwa nke ogige, na njedebe ị ga-echeta.
Nzuzo (1977): David Cronenberg dị oke egwu ma nwee mmekọahụ zombie. Otu nwa agbọghọ malitere ito egwu nke na-eme ọbara ya agụụ mgbe ọ rụsịrị ịwa ahụ na-eso ihe ọghọm ọgba tum tum.
Gịnụ Snaps (2000): Nwanyị a na-abịa n'afọ ga-abụ ihe nkiri wolf wolf na-enye ume ọhụrụ ị ga-ahụ. Mmetụta bara uru dị oke mma.
Okummadu Ehi ụra (1982): Otu maniac na-agba ụra na-agba ọsọ na-egbochi ndị na-enwe mmekọahụ na-ehi ụra na fim a kacha mma. Ọ na-emekwa usoro dị mma nke ịkwanye ụdị slasher n'ụzọ dị mma tupu oge ya.
Peeji: 1 2 3 4 5